Mpanamboatra sy mpamatsy DIGGING - Sina DIGGING China
Bonovo original design customizable general-duty excavator bucket ho an'ny orinasa fifamatorana
Bonovo General Duty Bucket ampiasaina amin'ny asa maivana toy ny fitrandrahana sy ny famoahana ny tany, fasika, vatolampy malalaka ary vatokely, sns. Ny fahaiza-manao lehibe, ny vy mahery amin'ny rafitra ary ny adaptatera amin'ny siny mandroso dia afaka mamonjy ny ora fiasana ary mampitombo ny fahombiazan'ny asa.
BONOVO fanao am-paosy kely fanaovana excavator ho an'ny ambongadiny sy ny antsinjarany
Natao ho an'ny fihadiana fihadiana bitika kely. Ny marika isan-karazany amin'ny excavator sy ny backhoe loaders dia azo ampifanarahana tsara. Ampiasaina indrindra amin'ny fampiharana marobe sy fitaovana mavesatra toy ny loto, loam, vatokely ary tanimanga.
Bonovo siny fitrandrahana adidy mafy Bonovo ho an'ny fandavahana amin'ny toe-tany mafy izay misy ny vatolampy
Bonovo Severe Duty Bucket dia manana endrika: matanjaka sy mateza; vy mahery mahatohitra haingo NM400 na Hardox dia ampiasaina hanamboarana lovia lehibe, lovia eo anilany ary loaka fanamafisana ny lovia ifotony. Fanamafisana ny takelaka, takelaka mpiambina, takelaka fiarovana ary adaptatera vita amin'ny siny voatokana ae, izay manatsara ny fanoherana mahery vaika sy miondrika ny siny.
Fampiharana: Ho an'ny fihadiana tany mafy miaraka amin'ny korontam-bato mafy na famoahana korontam-bato sy vatokely, famoahana siny mahery amin'ny fampiharana mahery vaika toy ny vatolampy mafy. Ny siny dia manome fiarovana avo lenta kokoa ho an'ny fiainana lava amin'ny fampiharana mahery vaika.
Bonovo avo lenta amin'ny fitrandrahana adidy ankapobeny ho an'ny famotehana tany
Excavator General Duty Digging Bucket ampiasaina amin'ny asa maivana toy ny fitrandrahana sy ny fametrahana ny tany, ny fasika, ny vatolampy ary ny vatokely, sns ... misy ny sisiny.Raha mihoatra ny 1 ka hatramin'ny 80 taonina ny milina. Namboarina mba hifanaraka amin'ny masinina fampiantranoana.
Ny varotra Bonovo dia mivarotra siny vatom-boaloboka asa be indrindra amin'ny fady vato malemy
Fampiharana Bonovo Extreme Duty Bucket amin'ny famoahana ny vatolampy henjana sy ny mineraly aorian'ny fipoahana. Dia natao manokana ho an'ny fandavahana hatrany ireo fitaovana mahery vaika indrindra, amin'ny toe-javatra mafy indrindra. Bonovo Extreme Duty Bucket dia noforonina mba hihoarana ny siny vato nentin-drazana rehetra. Ireo siny matanjaka ireo dia manana fonosana akanjo feno sy feno indrindra amin'ny paosy iray.